महिलामाथि ‘काँटी’ आक्रमण गर्ने रामेछापका सन्तोष कार्की सार्वजनिक - नेपाल मिडिया सेन्टर डट कम
महिलामाथि ‘काँटी’ आक्रमण गर्ने रामेछापका सन्तोष कार्की सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : Friday, June 28, 2019 nayapulonline
काठमाण्डाै/महिलाहरुमाथि श्रृखलावद्ध रुपमा शंकास्पद् ‘सिरिन्ज’ आक्रमण भएपछि धेरै मानिस त्रासमा परे । रोग सार्ने नियतले आक्रमण गरेको हुनसक्ने आशंकामा पीडित महिलाहरुलाई एआईभीविरुद्धको एआरटी औषधि चलाइएको छ भने हेपाटाइटिसविरुद्धको भ्याक्सिन दिइएको छ ।
महिलामाथि काँटीले आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले रामेछापका ३० वर्षिय सन्तोष कार्कीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। सिरिन्ज आक्रमण भन्दै त्रास फैलाउने उनलाई प्रहरीले बिहीबार राती पक्राउ गरी शुक्रबार (अाज) सार्वजनिक गरेको हो।
३० वर्षीया सन्तोषले अहिलेसम्म करिब आधा दर्जन महिला तथा युवतीमाथि काठको सुइरो र फलामको काँटी घोपिसकेका छन् । राजधानी काठमाडौंमा महिला तथा युवतीमाथि भइरहेको ‘सिरिन्ज (सुइ) आक्रमण’को आतंकका बीच प्रहरीले सन्तोषलाई पक्राउ गरेको हाे । बिहीबार राति काठमाडौंको महाराजगन्जबाट पक्राउ परेका सन्तोषले रमाइलोका लागि आफूले महिलामाथि काठको सुइरो र काँटीले आक्रमण गर्ने गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । उनको बयानलाई प्रहरी विश्वास गरिसकेको छैन र अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
आक्रणकारी पक्राउ नपर्दा पीडितहरु तथ तनावमा थिए । उनले ढल्कु र पकनाजोल क्षेत्रको घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारेका छन् ।
काे हुन सन्ताेष ?
रामेछाप घर भएर काठमाडौंको नैकाप बस्ने सन्तोष कार्की काठमाडौंको महाराजगन्ज (चक्रपथ) क्षेत्रमा फास्टफूड (खाजा) पसल सञ्चालन गर्छन् । दिनभर खाजा पसलमा ब्यस्त हुने सन्तोष साँझ फर्किँदा भने महिलामाथि आक्रमण गर्ने रहेछन् । राति १० बजे होटल बन्द गरेर मोटरसाइकलमा सोह्रखुट्टे, टंकेश्वर हुँदै नैकापस्थित कोठामा जान्थे । घर जाने क्रममा बाटोमा एक्लै भेटिएका महिलाहरुलाई आक्रमण गर्थे । घटनामा प्रयोग भएको बा ४७ प १३३१ नम्बरको मोटरसाइकल पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार उनले केही समयअघि मात्र कार्की वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर रेष्टुरेन्ट खोलेका थिए।’ प्रहरीले युवतीलाई आक्रण भएको क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसी टीभीबाट फुटेज निकालेर अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसकै आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरी कार्कीसम्म पुगेका थियो। महिलामाथि श्रृखलावद्ध शंकास्पद ‘सिरिञ्ज’ आक्रमण भएपछि प्रहरी उनीहरुको खोजी तिब्र पारेको थियो।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख (एसएसपी) सहकुल थापा भन्छन्, ‘उनले सुरुमा काठ र पछि काँटीले घोपेको हुँ भनेका छन् । यसबारे हामी थप अनुसन्धान गर्दैछौं ।’ प्रहरीका अनुसार गत जेठ १८ गते राति १० बजे काठमाडौं महानगरपालिका–१६ मा एक महिलामाथि मोटरसाइकलमा आएको व्यक्तिले आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि यो क्रम निरन्तर १ हप्तासम्म चलेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार जेठ १८ गतेसहित २० गते र ३२ गते राति आफूहरुमाथि मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको भन्दै काठमाडौंका केही महिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।
एसईई त कट्यो अब के पढ्ने ? यसरी छानौं कलेज र विषय..
आइफा अवार्ड : घरकीलाई म्याक्सी छैन, छिमेकीलाई ट्याक्सी ?
‘७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई हवाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट’
यस्ता पो अध्यक्ष, जस्ले सुविधाको मोटरसाइकल पनि त्यागे
अर्जेन्टिनालाई हराउँदै ब्राजिल फाइनलमा